छोरीको हत्या भएको भन्दै आमाले दिइन् जाहेरी - Naya Patrika
छोरीको हत्या भएको भन्दै आमाले दिइन् जाहेरी
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–३ मा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत १७ वर्षीया छोरीको हत्या भएको भन्दै उनकी आमाले मोरङ प्रहरीमार्फत किटानी जाहेरी दिएकी छिन् । मोरङ कटहरी गाउँपालिका–१ घर भएकी गुल्जार चौधरीले ललितपुर महालक्ष्मी–३ का विनय दाहाल, उनका ससुरा विराटनगर महानगर–७ का केशव दुलाल र सासू ६० वर्षीया गीता सिलवालविरुद्ध कर्तव्य ज्यान आरोपमा २८ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमार्फत महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।
एक वर्षअघि घरमा काम गर्न लगिएकी छोरीलाई चोरी गरेर प्रहरीमा थुनेकाले छुटाउन आउनुपर्‍यो भन्दै आफूलाई हवाईजहाजबाट २६ फागुनमा ललितपुर बोलाइएको उनको भनाइ छ । तर, आफू पुग्दा ललितपुरका विनय दाहालले झुन्डिएर मरेको भन्दै दबाबमा पहिले कागजमा सही गर्न लगाई पछि छोरीको शव जिम्मा लगाएर पठाएको उनले किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् । गुल्जारीले दाहालले नै आफ्नी छोरीको हत्या गरेको किटानी गरेकी छिन् । मोरङका एसपी अरुण बिसीले वादीले दिएको जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा चढाएकाले आफूहरूले बुझेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाइदिएको जानकारी दिए ।
दाहालको घरमा गर्थिन् काम
एक वर्षअघि १७ वर्षीया छोरी आइसालाई विनय दाहाल र उनकी श्रीमती विनाले केशव दुलाल र गीता सिलवालमार्फत घरमा काम लगाइदिने भनी लिएर गएका थिए । तर, २६ फागुनमा आमा गुल्जारीलाई छोरीले चोरी गरेकाले प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको भन्दै छुटाउन ललितपुर बोलाइयो । उनलाई दाहालका ससुरा केशव दुलालले लिएर गएका थिए । त्यहाँ पुगेपछि गुल्जारीलाई कागजमा सही गराएपछि तिम्री छोरी झुन्डिएर मरेको हो भन्दै सातदोबाटो प्रहरीको रोहवरमा जिम्मा लगाएर पठाइएको थियो ।
गुल्जारीले ललितपुरबाट छोरीको शव ल्याएको देखेपछि आफन्त र स्थानीयले हत्या भएको शंका गर्दै पोस्टमार्टम गराउन माग गरेका थिए । तर, मोरङ प्रहरीले एक ठाउँमा भएको शव परीक्षण अर्कै ठाउँमा गर्न नमिल्ने भन्दै कि त सातदोबाटो प्रहरीमार्फत नै पुनः परीक्षण गराउनु कि त दाहसंस्कार गर्न सुझाएको थियो । त्यसपछि आक्रोशित आफन्त र गाउँलेहरूले आइसाको शवसँगै दाहालको ससुराली घर रातभर घेराउ गरेका थिए । प्रहरीको रोहवरमा पुनः अनुसन्धानका लागि सातदोबाटो प्रहरीमा जाहेरी दिने सहमति भएपछि मात्र २८ फागुनमा आफन्तले दाहसंस्कार गरेका थिए ।
गुल्जारीले आफ्नी छोरी झुन्डिएर मरेको भए किन चोरी गरेर थुनामा परेको भनेर झुक्याएर आफूलाई ललितपुर लगिएको भन्दै जाहेरीमा प्रश्न गरेकी छिन् । प्रहरीमा पुग्नासाथ सबै कुरा नभनीकन किन झुक्याएर छोरीको शव जिम्मा लगाउने कागजमा सही गराइयो ? छोरी झुन्डिएर मरेको भए किन अभिभाकलाई नबोलाईकन डोरी काटियो ? छोरी झुन्डिएर मरेको भए शरीरमा निलडाम र रगत कसरी देखाप¥यो र गाला किन सुन्निएको थियो ? जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् ।